燃灯尼师 Dipankara Virtual Interview - 欧 美 澳 日等国家地区 - 觉悟之路 上座部佛教 Theravada Buddhism - Powered by Discuz!
觉悟之路 上座部佛教 Theravada Buddhism»上座部资讯 › 上座部佛教资讯区 Theravada Information › 欧 美 澳 日等国家地区 › 燃灯尼师 Dipankara Virtual Interview
燃灯尼师 Dipankara Virtual Interview
发表于 2020-10-19 19:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Brahma Vihari Meditation Centre ျဗဟၼဝိဟာရီဓမၼရိပ္သာ
Virtual Interview - San Francisco & Mexico
လွပေသာနံနက္ခင္းအခ်ိန္တြင္ ေဒၚဒီပကၤရာေထရီသည္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ တရားအားထုတ္လ်က္ရွိၾကကုန္ေသာ ေယာဂီအေပါင္းတို႔အား ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ကူညီရွင္းျပျခင္းႏွင့္ တရားစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို
ေမတၱာ ေစတနာမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲပါသည္။
-ယခုနှစ်အတွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပတရားစခန်းများအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါသော်လည်း တရားအားထုတ်လိုသောယောဂီများအတွက် ယခုကဲ့သို့ ကူညီခွင့်များရရှိခဲ့ပါသဖြင့်၊ မေတ္တာ စေတနာများစွာတို့ဖြင့်
စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြကုန်သော နိုင်ငံအများမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
-ပြုပြုခဲ့သမျှသော ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားတို့မှ ရရှိပါသော ကုသိုလ်အကျိုးတရားတို့ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံသူ,နိုင်ငံသားများနှင့်၊ ကမ္ဘာသူ,ကမ္ဘာသားအပေါင်းတို့အား ထပ်တူညီမျှပေးဝေမျှပါကုန်သည်။
- ဘေးအန္တရယ်များမှ ကင်းရှင်းကြပါစေ၊
- ကိုယ် စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲခြင်းများမှ ကင်းရှင်းကြပါစေ၊
- ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့် ဘာဝနာတရားများ ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြ၍ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရရှိရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ။
It’s another beautiful day on 19 October 2020, Daw Dipankara Theri shared an inspiring Dhamma talk and conductedagroup interview session to all the participants who were practicing in San Francisco and Mexico.
Due to the Covid-19 pandemic, Sayalay has cancelled all her international retreats this year. She is thus very happy that she could continue to share the Dhamma with the support of the technology over the virtual platform. She is also very grateful to all the organisers for coordinating the interview sessions.
May all merits thus accumulated from Dana, Sila and Bhavana be shared with all living in the world!
May these merits support everybody to be free from the dangers of Covid-19!
May all be free from mental suffering!
May all be free from physical suffering!
May all be well and happy, and practice meditation peacefully till the realisation of Nibbana!
Brahma Vihari Meditation Centre
• Buddhist Society of Western Australia
• Online Meditation Retreat 禅修营
• Bandar Utama Buddhist Society
• Zoom live Dhamma Talk
GMT+8, 2020-11-25 19:30 , Processed in 0.158755 second(s), 27 queries .